22/05/2022 - 11:53:54 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Baare katirsan kooxda Xasradaha caalamiga ah, lana hadlay warbaahinta Ingiriiska ee BBC-da ayaa tilmaamay inaaney sinaba suuragal u ahayn in awood milliteri lagu maquuniyo Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee saldhigeedu yahay Soomaaliya, sidoo kalena ka howlgasha wadamo dhaca bariga qaaradda Africa.
Itoobiya waxay yeelan doontaa Nuclear biyo ah, haddii ay mar saddexaad buuxiso biyo xireenka An-Nahda [Warbixin].
12/05/2022 - 08:51:02 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Dowladda Itoobiya ayaa weli sii wada qorshaha ay ku howlgelineyso biyo xireenka weyn ee An-nahda, kaasoo ay ka dhistay webiga An-niil qeybta uu ka maro dalka Itoobiya, waxaana tallaabada biyo xireenkaas ay ku dhistey illaa biyo buuxinta hadda ku socota uu dhaliyay muran caalami ah, gaar ahaan xiisad…
Dhageyso: Goob joogayaal ka warbixiyay sidii ay wax uga dhaceen saldhigga ciidanka Burundi ee deegaanka Ceelbaraf.
03/05/2022 - 11:45:49 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka ka dhacay deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Sh/dhexe.
18/04/2022 - 10:43:47 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Badar, ama Yowmul Furqaan, waa qawzo magac iyo maqaam sare ku leh taariikhda Islaamka, waa maalinkii uu Allaah sare yeeley diinkiisa, hoosna u dhigay shirkiga iyo kufriga, waana maalinkii aan ogaannay in guushu aaney ku iman cudud iyo awood toona, laguna helo oo keliya in Allaah la isku dhiibo, isagana…
MAQAAL: Ma Sidaan Ka Filaayay Mise Saan Kusoo Arkay? WQ: Cumar Gaadaco.
14/04/2022 - 18:27:03 Warbixinno Warsame Warfaa
Laba maalmood ka hor bishan Ramadaan, waxaan xilli aroor ah safar uga kallahay magaalada Muqdisho kadib markii arrin degdeg ah oo quseysa familkeena ay iigu yeertay hooyadey Faadumo Ashkir oo ku nool magaalada Bu'aale ee xarunta gobolka Jubbada Dhexe, halkaasoo ay iigu dambeysay muddo 15 sano laga…
13/04/2022 - 10:30:59 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Maxaan kanaqanaa Qeybaha Soomku u qeybsamo? ku dhageyso [Dersiga 8aad].
08/04/2022 - 21:19:28 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Maadama aan ku jirno bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan idiinsoo gudbinaynaa masaa'il ku saabsan Axkaamta iyo Fiqhiga soonka.
Maxaan ka garanaynaa Asraarta ku jirta Soomka? ku dhageyso [Dersiga 7aad]
07/04/2022 - 14:28:24 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Maxaa ka jira in Al-Shabaab ay qorshaynayaan dilka Rooble iyo Farmaajo? [WARBIXIN].
05/04/2022 - 20:17:31 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Waxaa saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta la isla dhexmarayay hadal kasoo baxay hay'ada sirdoonka DF kaas oo ay ku sheegtay inay Al-Shabaab qorshaynayso khaarijinta Farmaajo iyo Rooble.
Muxuu yahay Albaabka ay Jannada ka gelayaan dadka Soomaan [Dhageyso Q5aad].
05/04/2022 - 13:45:12 Warbixinno Liibaan Jeexoow
02/04/2022 - 06:50:22 Warbixinno Somali Memo
Mid kamida Raggii ka qeyb qaatay Xerada Xalane oo xogtiisa la faafiyay [Dhageyso].
30/03/2022 - 11:16:36 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Idaacadda islaamiga Andalus ayaa faafisay xogta mid kamida raggii fuliyay weerarkii isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay xerada Xalane ee magaalada Muqdisho.
Kadib markii lacagta dalkoodu qiima beeshay Dadka Ruushka oo bilaabay in ay lacagahooda dahab ubedeshaan [Warbixin].
24/03/2022 - 11:26:05 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine ee galay todobaadkii afaraad waxa uu dhulka la galay dhaqaalihii Ribada ku dhisnaa ee dowladda Ruushka, heer hadda ay mareyso in ganacsatada iyo maal qabeennada ay ku kalsooneyn lacagta Robelka ee Ruushka, una bedelanayaan dahab iyo qalin, oo ah lacag adag…
Dowladda Kenya oo qarineysa ciidankeeda ku la'anaya Soomaaliya! [Warbixin].
23/03/2022 - 12:47:17 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska Star ee kasoo baxa dalka Kenya ayuu kaga hadlay dhiig baxa ciidamada Kenya ku heysta gudaha Soomaaliya, halkan oo ay kual kulmayaan weeararo joogta ah oo uga imaanay Xarakada Al-Shabaab.
Itoobiya Oo billowday in Korontada ay ka dhaliso biyo xireenka An-nahda, Sidey uga jawaabi doontaa Masar?
23/03/2022 - 12:12:26 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Iclaamintii dowladda Itoobiya ay ku sheegtay in marxalad cusub oo dab dhalin ah uu galay biyo xireenka An-nahda, 20kii Febraayo ee aynu soo dhaafney, wuxuu ka dhignaa weji horleh oo uu yeeshey mashruucan Itoobiya u aragto billowga hormarkeeda, halka dowladaha uu maro webiga Niilna u arkaan inuu yahay…
Sh. Aadan Sunni oo soo gaaray Wilaayaatka Islaamiga iyo soo dhaweyn heersare ah oo loo Sameeyey [WARBIXIN].
21/03/2022 - 16:09:41 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Sheekh Aadan C/Raxmaan Warsame oo ku magacdheer Sh. Aadan Sunni oo dhawaan isaga soo haajiray deegaannada uu ka arrimiyo maamulka Somaliland ayaa soo gaaray wilaayaatka Islaamiga, halkaas oo uu kala kulmay soo dhaweyn aad u diiran oo uu ka helay qeybaha kala duwan ee bulshada.
CIA-da Maraykanka oo jirka Maxaabiista Guwatanamo u adeegsata mid lagu tababaro Baarayaasha ku cusub shaqada!
17/03/2022 - 12:35:03 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Dukumentiyo rasmi ah oo dhawaan shaaca laga qaaday ayaa muujiyay sida saraakiisha CIA-da Maraykanku u tacdiibiyaan maxaabiista muslimiinta, heer jirkooda ay ka dhigeen aalad lagu tababaro baarayaasha su'aalaha weydiiya maxaabiista ee shaqada ku cusub.
Duullaanka Ruushka ee Bariga Yurub oo saameyn dhaqaale reebay [Warbixin].
16/03/2022 - 12:21:13 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Hardanka udhaxeeya Reergalbeedka iyo Ruushka ayaa saameyn dhaqaale oo aad u ballaaran ka geystay guud ahaan daafaha caalamka arrinkaas oo hadal heyntiisa laga dareemayo suuqyada maaliyadda.
Mareykanka oo saadaal aan fiicnayn ka bixiyay xaaladda Bariga Afrika sanadda 2022 [Warbixin].
14/03/2022 - 12:19:43 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Warbixin cusub oo ay soo saartay dowladda Mareykanka ayay ku muujisay khatarada kasoo food leh qaar kamid ah wadamada dhaca geeska qaaradda Afrika oo Soomaaliya ay kamid tahay.
Maxay tahay dowladda Qunyar socodka ah ee uu Bin Salmaan la doonayo Sacuudiga? [Warbixin].
06/03/2022 - 16:51:09 Warbixinno Liibaan Jeexoow
Muxamad bin Salmaan, dhaxalsugaha maamulka Aala-Sucuud ayaa waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya, hadal heynna dhaliyay waxa uu siiyay wargeys lagu magacaabo The Atlantic oo kasoo baxa dalka Maraykanka.